Diyo post :: अजितहरु मारिँदा हामी चुप कहिलेसम्म ? आउनुहोस् बोलौं अजितहरु मारिँदा हामी चुप कहिलेसम्म ? आउनुहोस् बोलौं - Diyo post
अजितहरु मारिँदा हामी चुप कहिलेसम्म ? आउनुहोस् बोलौं
नेपाली समाजमा अझै पनि जातीय विभेदले जरा गाडेको छ । राजधानी सहितका जिल्लाहरुमा समेत अहिले विभेद कायम छ । परिस्थीति फरक भएपनि विभेद उही छ ।
धेरै जस्तो विभेद त त्यति बेला देखिन्छ जतिबेला कुनै जोडीले अन्तर्जातिय विवाह गर्छन् । सायद यही कारणले होला अहिलेका युवाहरु जति सुकै पढेलेखेको भएपनि अन्तर्जातिय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्दैन वा चाहाँदैनन् ।
किनकि यस्तो प्रेम सम्बन्धलाइ समाज तथा परिवारले स्विकार गर्दैन । वा भनौं अहिलेको युवाहरु समाज वा परिवार र जात व्यवस्थाको दास भएका छन् ।
कसैले अन्तर्जातीय विवाह गरिहाले पनि त्यस्ता जोडीहरुलाई कुटपिट ,गाउँ निकाला, मानसिक यातना दिईन्छ ।
काभ्रेको एक घटनाले अहिले नेपाली समाजलाई गिज्याईरहेको छ ।
गत महिना असार २५ गते काभ्रे जिल्लाको होक्से घर भएका अजित मिजारले गाउँकै उपल्लो जातकी एक महिलासँग प्रम गरे । प्रेम विवाहमा परिणत भयो । केटी पक्षले अजितको विहेलाई अस्विकार ग¥यो । जिल्लामा मुद्दा मामिला पनि भए । प्रशासनकै रोहबरमा उनको विहेलाई विच्छेद गराईयो । घरबाट ५० रुपैयाँ रिचार्ज लिएर हिँडेका अजित बेपत्ता भए । दुई दिनपछि धादिङको मलेखु स्थित फुर्केखोला किनारमा उनको झुन्ड्याइएको शरिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । परिवारले पछ्याउँदै जाँदा प्रहरीले नक्कली पाेस्टमार्टम गरेर गाडेको थाहा भयो । आफन्तले गाडिएको लास खोतले र बाहिर ल्याए । काठमाडौं ल्याएर शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गराउन पनि अस्पताल राजी भएन । गृहमन्त्रालयको अनुमति पछि पोष्टमार्टम भयो । तर, दुई महिना वित्दासमेत पोस्टमार्टमको रिपोर्ट बाहिर आएको छैन ।
घटना घटेको दुई महिना वित्न लाग्दा समेत राज्य पक्षले अहिलेसम्म आरोपहरुलाई पक्राउ गर्ने कुरा कहाँ हो कहाँ मुद्दा दर्ता समेत गरेको छैन ।
हामीले बाँचेको पुस्ताको लागि अजितहरु मारिनु ठूलो उपहास हो । उ फरक जात भएकैले कसैसँग प्रेम गर्न नपाउने यो कस्तो परम्परा हो । के यो समाजमा जन्मनु नै उसको गल्ति हो ? अजितहरुको हत्या गरेर खुसी मनाउँने समाज उदेक लाग्दो छ ।
भर्खरै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले घटनाको छानबीन गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसैको आधारमा छानवीन आयोग पनि बनेको छ । मुद्दा दर्ता गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यतिबेला निर्देशन मात्रै होईन हत्यारा पक्राउ भएको देख्न चाहान्छौं हामी । तर, केही नहुनुभन्दा केही हुने संकेत देखिएका छन् ।
कुनै पनि घटना घटेपछि शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याईन्छ । र, ती व्यक्तिहरुमाथिको अनुसन्धानबाट घटनाको रहस्य पत्ता लगाउने कार्य नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ । प्रसिद्ध फूटबलर विमल घर्ति मगरकी बहिनी मनिषा घर्तिको हत्याको विषयमा प्रहरीले तत्काल एक्सन लिएको थियो । तर, अचम्म यहाँ न्यायमा पनि विभेद छ । अजितको हत्या भएको किटानी दिँदा पनि प्रहरी र प्रशासन मौन छ ।
यो राज्य सार त मानवता विरोधी छ । यहाँ जातका आधारमा न्याय छुट्याईन्छ । दलित या गरिबहरु राज्यबाटै अन्यायमा परेको यो गतिलो उदाहरण पनि हो ।
केही वर्ष अघि राजधानीको बसन्तपुरमा जीवन विकले उनकै प्रेमिका संगीता मगरमाथि एसिड प्रहार गरे । जातीय विभेदको शिकार बनेका जिवनले प्रतिशोधमा आएर एसिड हानेको प्रहरीलाई बताएका थिए ।
त्यतिबेला उनलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सडकमा उफ्रनेहरुको भिड थियो । त्यो भिडकै आक्रोशका कारण दबावमा आएको प्रहरीले ‘क्विक रेस्पोन्स’ भारतसम्म पुगेर जीवनको खोजी गरेको थियो । तर, नेपालमा भिडहरु ठूला जातका पछाडी लाग्छन् । ठूला जातहरुमाथि केही छिस्स भयो भने त्यो भिड न्यायको लागि आवाज उठाउँछ । तर, जीवनले जातिय विभेद झेलेको आवाज न त्यो भिडले बोल्यो न त न्यायलयलै बुझ्न सक्यो ।
अजित मिजारले तल्लो जात भएकै कारण मृत्युको शिकार हुँदा न्यायको आवाज उठाउनेहरु चुप छन् । सायद नेपालमा आवाज पनि जातीवादी बन्दैछ ।
हामी युवाहरु पनि त्यही मानसिकताबाट ‘गाईडेड’ हुने होकी आवाज उठाउने हो । भारतमा रोहीत बेमुलाको हत्या हुँदा हजारौं युवाहरु सडकमा उत्रिए । राज्य झुक्न बाध्य भयो । सोही आन्दोलनबाट कन्हैयाँ कुमार जस्ता प्रखर युवा नेताहरु जन्मिए । हामीहरु नेपालमा रमिता हेरेर बसिरहेका छौं । हामी बाँचेको समाजमा एउटा युवा दलित भएकै कारण मारिँदा पनि हामी चुप छौं । यदि यो समाचार भोलीको पुस्ताले सन्नु प¥यो भने हामीलाई धिक्कार्नेछ । हामी बोल्नु पर्छ ।
बोलीहरुमा लगाम लगाउँन सक्ने तागत दुनियाँमा कसैसँग छैन । आउनुहोस् नेपाल हाम्रै हो । हामीले पनि यो देशमा स्वतन्त्र भएर उड्न पाउँनुपर्छ ।